သတ္တမနေ့၌ဘုရားသခင်သည်အဘယ်ကြောင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေသနည်း။ Online Online️အွန်လိုင်းကိုရှာဖွေပါ
သတ္တမနေ့၌ဘုရားသခင်သည်အဘယ်ကြောင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေသနည်း။ ဖန်ဆင်းခြင်းရဲ့သတ္တမနေ့ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါအဲဒါကိုပြောခြင်းအားဖြင့်ငါတို့လုပ်တယ် ဘုရားသခင်သည်သူ၏အမှုပြီးမြောက်ပြီးနောက်အနားယူခဲ့သည်မရ။ ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်သည် မြင့်မြတ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်မရ။ သို့သော်ဤကြေညာချက်သည်အချို့ကိုသယ်ဆောင်လာသည် တိကျမှုမရှိသောဘုရားသခင့်သဘောသဘာဝအပေါ်သက်ရောက်မှုများသတ္တမနေ့၏စစ်မှန်သောသတင်းစကားကိုမှားယွင်းစွာနားလည်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦး တည်စေသည်။
သတ္တမနေ့တွင်ဘုရားသခင့်အနားယူခြင်းအကြောင်းပြောရာတွင်ဘုရားသခင်သည်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းရန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောအလုပ်များမှအနားယူရန်လိုသည်ကိုငါတို့နားလည်သည်။ ဒါပေမယ့်သူအနားယူတာကတကယ့်အကြောင်းအရင်းပါ ၎င်းသည်သူ၏အလုပ်ကိုဆင်ခြင်ရန်၊ ကောင်းချီး ပေး၍ သန့်ရှင်းစေသည်မရ။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်စံနမူနာတစ်ခုဖြစ်ရန်အနားယူသည် ငါတို့အနားယူပြီးငါတို့ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုပျော်ရွှင်ပါစေ။
ကမ္ဘာ ဦး ၁: ၁
မြေကြီးစွန်းတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူသောထာဝရဘုရားသခင်သည်ထာဝရဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုသင်တို့မသိကြသလော။ သူသည်အားမလျော့၊ မောပန်းခြင်းမရှိ၊ သူ၏ဥာဏ်ကိုလက်လှမ်းမမှီနိုင်ပါ။
ကျဟရှောယ 40: 28
သင်မြင်သည့်အတိုင်းဘုရားသခင်သည်မပင်ပန်းပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးသူသည်ကုန်ဆုံးနိုင်သောစွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အနားယူခြင်းသည်အလုပ်ရပ်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ ကမ္ဘာ ဦး ၂: ၂ ကိုငါတို့ဖတ်တဲ့အခါဘုရားသခင်ကပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကနေအနားယူသွားပြီလို့မဆိုလိုပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲဒီနေ့မှာသူအလုပ်မလုပ်တော့ဘူး။
ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးသည်ပြီးစီးခဲ့သည်။ သတ္တမနေ့၌ဘုရားသခင်သည်သူပြုသောအမှုကိုပြီးစီး။ ၊ သတ္တမနေ့၌သူပြုသောအမှုအလုံးစုံတို့ကိုငြိမ်ဝပ်စွာနေစေ။
ကမ္ဘာ ဦး ၂:၁၈
သတ္တမနေ့ရောက်သောအခါဘုရားသခင်သည်သူဖန်တီးရန်ကြံစည်သမျှကိုပြီးမြောက်စေခဲ့သည်။ ဖန်တီးဖို့ဘာမှမကျန်တော့ဘူး။ ထို့ကြောင့်၊ ဘုရားသခင်သည်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုရပ်ပြီးအနားယူသည်.
ဒါကဘုရားသခင်နဲ့မပတ်သက်တော့ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး el Mundoမရ။ ဘုရားသခင်သည်ကမ္ဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခြင်းမှရိုးရှင်းစွာအနားယူခဲ့သည်။ ယနေ့ထိအလုပ်ဆက်လုပ်ပါ။ ဘုရားသခင်သည်ကမ္ဘာကြီးကိုဂရုစိုက်ရန်အနားယူရန်သို့မဟုတ်အားလပ်ရက်မယူပါ။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်နေသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကူညီရန်အဆင်သင့်မရှိသောအချိန်မရှိပါ။
ယေရှုကလည်း၊ ငါ့ခမည်းတော်သည်ယခုတိုင်အောင်အလုပ်ဖြစ်တယ်၊ ငါလည်းအလုပ်လုပ်တယ်။
သတ္တမနေ့တွင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဥပမာတစ်ခုအနေနှင့်အနားယူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည်မပင်ပန်းသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ပင်ပန်းသည်။ ငါတို့အနားယူဖို့အချိန်ယူရမယ်။ ကမ္ဘာ ဦး ၂: ၃ ဘုရားသခင်ကသတ္တမနေ့ကိုကောင်းချီးပေးပြီးသန့်ရှင်းစေတယ်လို့ပြောတယ်။ သတ္တမနေ့ကိုအနားယူရန်နှင့်ဘုရားသခင်အားဆက်ကပ်အပ်နှံသောနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။
အနားယူခြင်းသည်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တပ်ဖွဲ့များအားပြန်လည်အားဖြည့်ရန်သာမကအရေးကြီးသည် ဘုရားသခင်နှင့်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်နှင့်သူ၏ဖန်တီးမှုများကိုတန်ဖိုးထားရန်။ El အနားယူခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သင့်သည်; ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုပြုလုပ်ရန်တစ်ပတ်လျှင်တစ်ရက်သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ ထို့ကြောင့်၊ သူသည်ငါတို့လိုအပ်သောအရာများအမြဲရစေရန်သတ္တမနေ့ကိုသန့်ရှင်းစေခဲ့သည်။
သတ္တမနေ့သည်သင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားဥပုသ်နေ့ ဖြစ်၍၊ မင်းရဲ့သား၊ သမီး၊ မင်းရဲ့ကျွန်၊ မင်းအစေခံ၊ မင်းရဲ့သားရဲ၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းရဲ့တံခါးနားမှာရှိနေတဲ့တိုင်းတစ်ပါးသားကိုအလုပ်မလုပ်ပါနဲ့။
ထွက်မြောက်ရာ ၂၀: ၈-၁၀
ဒါကဖြစ်ခဲ့တယ်! ဒီဆောင်းပါးရဲ့အဓိပ္ပါယ်အစစ်အမှန်ကိုမင်းနားလည်ဖို့ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် သတ္တမနေ့၌ဘုရားသခင်အဘယ်ကြောင့်ငြိမ်ဝပ်စွာနေသနည်းမရ။ သင်သိလိုလျှင်စိတ်ဝင်စားပါ ခရစ်ယာန်များသည်စနေနေ့တွင်အဘယ်ကြောင့်မအနားယူရသနည်း သမ္မာကျမ်းစာကျမ်းပိုဒ်များမှတစ်ဆင့်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါ Discover.online ။